Health – Page 61 – WunYan
တစ်ခါတစ်လေ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တဲ့အခါ ရင်ကြပ်တာ အသက်ရှုကြပ်တာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သူက ချွဲသလိပ်တွေ ကပ်နေစေတတ်ပြီး ရင်ဘတ် တင်းကြပ်နေတာမျိုး အသက်ရှုမ၀တာမျိုး ဖြစ်စေပါတယ်။ အအေးမိခြင်း၊ တုတ်ကွေး၊ ချောင်းဆိုးတာနဲ့ အဆုတ်အအေးပတ်ခြင်းက ရင်ကြပ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါတွေက အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောဂါတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပြီး ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ အခုပြောပြမှာတော့ ရင်ကြပ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် အိမ်တွင်းကုထုံးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ ရေနွေးငွေ့ ရေနွေးငွေ့ကို…
အားလုံးက လက်လျှော့ခဲ့ရတဲ့ အသည်းကင်ဆာရောဂါ ကို နှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်း ပေါ်ပြီ
ဒီဆေးနည်းသိတာကြာပါပြီ။ ဆေးပင်ဓါတ်ပုံမရှိတာနဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဓါတ်ပုံရပြန်တော့လည်း အလုပ်များနေတာနဲ့ မရေးဖြစ်ပြန်ဘူးလေ။ တလောက အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံကျောင်းတိုက်က သူငယ်ချင်း စာချဘုန်းကြီးတစ်ပါး အသဲကင်ဆာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်ဆေးရုံတက်တဲ့အကြောင်း သူ့တပည့်ရဲ့ FB မှာတွေ့ရတယ်။ ဒီဆေးနည်းလေးပြောပြလိုက်ပါလို့တော့ ပြောမိရဲ့။ ပြောသလားတော့ မသိ။ ယနေ့တော့ ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းသူတစ်ဦးရဲ့ဆွေမျိုးတစ်ဦး အသဲကင်ဆာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပြန်တယ်။ သူ့ဆွေးမျိုးက မြန်မာပြည်မှာပါ။အသဲကင်ဆာဆိုရင် ဆေးနည်းရှိတယ်လို့ပြောလိုက်မိတယ်။သူက အပူတပြင်းတောင်းတယ်လေ။ ခုလာယူရမလားတဲ့။ ဆေးမရှိပါ။ ဆေးနည်းသာ သိထားတာပါ။ ဆေးကုတတ်တဲ့ဘုန်းကြီးလည်း…
ဖယောင်းတိုင်ကို မီးထွန်းပြီးထွက်လာတဲ့ အငွေ့ဟာ လူတွေကို ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းခြင်းဟာ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်သလို ကင်ဆာ ရောဂါပါ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နောက်ဆုံး ရှာဖွေလေ့လာမှုများ အရသိရပါတယ်။ ဖယောင်းသားကို မီးလောင်တဲ့ အခါ အဲဒီကထွက်တဲ့ အငွေ့ဟာ အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ လေကို ညစ်ညမ်းစေပြီး လူတွေအတွက် ကင်ဆာပါ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ၂၃၈ ကြိမ်မြောက် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဓါတုဗေဒ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အစည်းအဝေး မှာတော့ Amid Hamidi ဆိုသူက ဒါက လေဝင်လေထွက်မကောင်းတဲ့…
ငှက်ပျောသီးက ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူကြိုက်အများဆုံးအသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငှက်ပျောခွံမှာ အစက်အပျောက်တွေဖြစ်လာတာ ညိုမဲလာတာနဲ့ လွင့်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိ အစက်အပျောက်တွေရှိနေတဲ့ ငှက်ပျောသီးမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီငှက်ပျောသီးကို တစ်နေ့ ၂ လုံးစားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုစားပေးတာဟာ ဆိုဒီယမ်ဓါတ်နည်းတာနဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓါတ်များတာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ သွေးတိုးတာကို ကျစေသလို လေဖြတ်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကောင်းမွန်စေပြီး…
အူအတက်ပေါက်ခါနီး တွေ့ရှိရတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများ
1. ခါတိုင်းထက်ပို၍ ဆိုးရွားစွာဗိုက်အောင့်ခြင်း အူအတက်ရောင်ခြင်းကြောင့် ခံစားရတဲ့နာကျင်မှုဟာ လွန်စွာဆိုးရွားကာ ချက်နားတစ်ဝိုက်မှတဆင့် ညာဘက်ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းထိ ပျံ့နှံ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနာကျင်မှုဟာ အူအတက်ပေါက်တော့မယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပေမယ့် သေချာစေဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ကဲ့သို့ စစ်ဆေးမှုမျိုးကိုမူ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အူအတက်ရောင်တဲ့လူနာတွေမှာ မတူညီတဲ့မသက်မသာဖြစ်မှုတွေ အမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ကားပေါ်တက်ခြင်း စတဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအပြုအမူတွေကြောင့် နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါက ဝမ်းဗိုက်တပြင်လုံးဟာ ရောင်ရမ်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းအခြေအနေသည် အူအတက်ပေါက်လုဆဲဆဲ (သို့) ပေါက်ပြီးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 2. ပျို့အန်ခြင်းနှင့်…